Kuvaka Matemplate Akaomarara neHubspot | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 6, 2015 Muvhuro, March 25, 2019 Douglas Karr
Isu takanaka agnostic kana zvasvika kumapuratifomu ekushambadzira otomatiki, kusimudzira peji kusimudzira uye kushambadzira neemail. Takashanda uye takawana chitupa Hubspot makore mashoma apfuura, uye isu takafadzwa nesom yezvinhu, asi dhizaini zvinhu zvaive zvishoma. Izvo hazvisi izvo zvekare.
Mumwe wevatsigiri vedu, FatStax, akatanga ne Hubspot asi anga asina kuita dzese sarudzo. Kufanana nekutanga kwakawanda, vanga vachishanda mukusimudzira bhizinesi uye vanga vasina nguva yekushandisa mhinduro zvizere, saka vakatikumbira rubatsiro sechikamu chehurongwa hwakazara hwekutengesa. Vhiki rapfuura, vakatanga chirongwa cheMubatanidzwa chevamiriri kuti vasaine, uye yaive yedu yekutanga kupfura pakuvaka template huru yavo.
Vakapa chimiro cheHTML, uye taifanira kuchidudzira icho Hubspot. Ini ndaive ndakangwarira pakutanga, ndichivaudza kuti isu tichaita zvakawanda sezvataigona kupa templating system mukati Hubspot. Kiyi yekugadzira iyo template yaive yekuti isu taigona kuumbiridza iyo template toshandisa iyo kune zvimwe zvinopihwa uye mapeji ekumhara. Isu taifanira kuzviita nemazvo… kuitira kuti timu kuFatStax igone kugadzirisa pasina rubatsiro rwedu.
Mushure mekuziva iyo chikuva uye kushandisa imwe nguva pane Hubspot's Designer Resource Saiti, takanyatso kufadzwa nemushandisi interface uye zvidimbu zvekudzika. Pasina kuenda mune zvakadzama, isu hatina kuwana zvirambidzo kune yavo templating system chero.
Mhedzisiro yacho inoda zvimwe zvidiki zvidiki, asi zvakapfuura zvatinotarisira (uye zvedu). Muchokwadi, ndinotenda isu takango gadzira imwe CSS yekugadzirisa kuti template inyatso shanda - hezvino zvayakaratidzika.
Tags: hubspothubspot mugadzirihubspot templatehubspot templating